I-Resin Bond yedayimani yabavelisi kunye nababoneleli
I-SND-R20 yePremiyamu yeBakala eBlocky kunye nokuKhathazeka okuMncinci kwi-Resin Bond Diamond
Kunconywe i-vitrified bond kunye ne-resin bond (i-phenolic kunye ne-polyimide). Iinkqubo ze-Resin Bond zisetyenziswa ngokubanzi kuzo zonke izinto ezenziwayo xa kusenziwa izicelo zokugaya kwi-phenolic okanye i-polyimide bond. Iinkqubo zeBitrified Bond zenziwe kwizixhobo zeceramic ezomeleleyo, zomelele kwaye zincinci. Iibhondi ezine-Vitrified ziyasebenza kakhulu kwimisebenzi yokugaya eqhubele phambili ngenxa yokukwazi kwabo ukubamba irhasi kunye nokunciphisa ukuveliswa kobushushu kwindawo yokugaya ngenxa ye-porosity ephezulu yabo ...
I-SND-R05 yeXabiso eliPhezulu lokuBanda kweBond Diamond Particles yokuSebenza ngokuPhezulu kokuSila
Amaqondo aphezulu e-Resin Bond yeDayimani yamasuntswana eeSicelo sokuGaya esiPhezulu esiCetyiswayo senzelwe i-vitrified bond kunye ne-resin bond (i-phenolic kunye ne-polyimide). I-SND-R05 ine-resin bond resinability ephezulu kakhulu enesakhiwo se-crystal esikhuthaza ukwaphuka okuncinci. Ukusebenza kwezicelo zokugaya ezichanekileyo eziphezulu apho ukugqitywa komphezulu kuyinto ebalulekileyo. Igama: I-RVG Diamond Powder Brand: SND-R05 Mesh: 60 / 70-325 / 400 Umbala: Isicelo seGrey: Ilungele i-v ...
I-B10 emnyama yeCubic Boron Nitride Superabrasives CBN Powder
I-Cubic Boron Nitride Superabrasives I-CBN Powder B10 1. ICubic Boron Nitride Intshayelelo I-CBN (i-cubic boron nitride) i-superabrasive inobunzima obuphezulu kunye nokuchasana kobushushu obuphezulu, amatyeli amane okwexeshana kokunganyangeki kokunxiba, kunye nokuqhuba ngokungaqhelekanga kwe-thermal. I-CBN isetyenziswe ngokubanzi ekusetyenzisweni kwemakethi yokuvelisa, ukusuka kwi-superalloys ye-aerospace kunye nokutshiza kwe-thermal ukuya kwisinyithi esomeleleyo kwimveliso yeemoto kunye ne-gear gear ukuphucula ukusebenza kakuhle ...
I-B20 emnyama yeCubic Boron Nitride ye-CBN Powder ye-Vitrified Bond
I-B20 Black Cubic Boron Nitride I-CBN Powder ye-Vitrified Bond 1. I-Cubic Boron Nitride Intshayelelo ye-CBN (i-cubic boron nitride) i-superabrasive inobunzima obuphezulu kunye nokuchasana kobushushu obuphezulu, amatyeli amane e-abrasive yemveli ekuxhathiseni ukunxiba, kunye nokuqhuba okungaqhelekanga kwe-thermal. I-CBN isetyenziswa ngokubanzi ekuguqulweni kwemakethi yokuvelisa, ukusuka kwi-aerospace superalloys kunye nokutshiza kwe-thermal ukuya kwisinyithi esomeleleyo ekuthweleni iimoto kunye nakwishishini lokuhambisa ...